सबैलाई हसाउने गुल्मीकी भाइरल आमाको माइतिघरमा पुग्दा चल्यो रुवाबासी ।। के भयो भाइलाइ ? (हेर्नुहोस भिडियो) – Khabar28media
सबैलाई हसाउने गुल्मीकी भाइरल आमाको माइतिघरमा पुग्दा चल्यो रुवाबासी ।। के भयो भाइलाइ ? (हेर्नुहोस भिडियो)
July 1, 2021 - by Vikash - LeaveaComment
काठमाडौको सडकमा सवारी ब्यस्थापनको लागि खटेका ट्राफिक प्रहरी पनि छक्क परे । सरकारले लामो समय देखिको निषेधाज्ञाका कारण सर्वसाधारणको आर्थिक उपार्जनको श्रोत बन्द गरिँदा अप्ठेरो परेको भन्दै निषेधाज्ञा खुकुलो बनायो । तर संक्रमणको ‘चेन ब्रेक’ नहुँदै सडकमा ट्राफिक प्रहरीलाई नै छक्क पार्नेगरी सवारी साधनको चाप बढेको छ।
काठमाडौं उपत्यकामा मंगलबारदेखि निषेधाज्ञा थप खुकुलो बनाउँदै एक साता थपिएको छ। काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। अब २५ सिट क्षमताभन्दा माथिका बस जोर–बिजोर प्रणालीका आधारमा चल्नेछन्। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा छ ।
Previous Article काठमाण्डौंमा एकाएक बाढी आयो, बागमती किनारका यी बस्तीमा पस्यो पानी !! (भिडियो हेर्नुहोस्)
Next Article हे भगवान् ! के देख्नुपरेको यो, जन्मजातै दुवै हात छैनन् तर सबै काम खुट्टाले गर्छन (भिडियो हेर्नुस्)